शारीरिक स्वास्थ्य—अर्थपूर्ण जीवनको लागि बाइबलको सुझाव
हुनत बाइबल कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी किताब होइन तर हामीलाई स्वस्थ रहन मदत गर्ने थुप्रै सल्लाह-सुझाव भने यसमा पाइन्छ। स्वस्थ रहन मदत गर्ने बाइबलका केही सिद्धान्तहरू विचार गरौँ:
आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुहोस्‌
बाइबलको सिद्धान्त: “कुनै मानिसले आफ्नो शरीरलाई कहिल्यै घृणा गर्दैन बरु त्यसलाई त्यसरी नै खुवाउँछ अनि स्याहार्छ।”—एफिसी ५:२९.
यसको अर्थ के हो? यस बाइबल पदले हामीलाई आफ्नो शरीरको ख्याल राख्न प्रोत्साहन दिन्छ। एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार हामी कस्तो जीवनशैली अपनाउने छनौट गर्छौँ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ। त्यसैले सही छनौट गऱ्‍यौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ।
पोषण। पोसिलो खानेकुरा खानुहोस्‌ अनि प्रशस्त पानी पिउनुहोस्‌।
तन्दुरुस्त भइरहनुहोस्‌। ढल्कँदो उमेरले गर्दा अथवा अशक्‍त हुनुभएकोले वा गम्भीर रोग लागेकोले तपाईँ पहिले जति गर्न सक्नुहुन्‍न होला। तर शारीरिक कसरत गर्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पर्छ। तपाईँलाई परिवार, साथीभाइ वा डाक्टरहरूले व्यायाम गर्ने सुझाव अनि हौसला त देलान्‌ तर स्वस्थ रहन तपाईँ आफैले केही नगरी हुँदैन!
पर्याप्त सुत्नुहोस्‌। लामो समयसम्म अनिदो बस्ने मानिसहरूलाई गम्भीर रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। सुत्ने बेलामा अरू कामकुरामा व्यस्त हुने मानिसहरूको निद्रा पुग्दैन। तर पर्याप्त सुत्ने मानिसहरू स्वस्थ अनि चुस्त हुन्छन्‌।
हानिकारक बानी त्याग्नुहोस्‌
बाइबलको सिद्धान्त: “तन र मनलाई अशुद्ध पार्ने हरकिसिमका कुराबाट अलग रहेर आफूलाई शुद्ध पारौँ।”—२ कोरिन्थी ७:१.
यसको अर्थ के हो? सुर्तीजन्य हानिकारक लागूपदार्थको सेवन नगरेर हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ किनकि यस्ता पदार्थहरूले नै रोग र मृत्यु निम्त्याउँछ।
तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो कुलत कहिले त्याग्ने, त्यो दिन तोक्नुहोस्‌ र क्यालेन्डरमा चिन्ह लगाउनुहोस्‌। अनि उक्‍त दिनको ठीक अघिल्लो दिन चुरोट, चुरोटदानी, लाइटर, सलाई र आफ्नो खराब बानीसित सम्बन्धित सबै कुरा फ्याँक्नुहोस्‌। आफ्नो कुलतलाई बढवा दिने वा उक्साउने ठाउँहरूमा नजानुहोस्‌। परिवार अनि साथीभाइलाई आफ्नो निर्णयबारे बताउनुहोस्‌।
कोही एक जना यहोवाको साक्षीमार्फत तपाईँले एउटा बाइबल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस्‌।
“तिमीहरूले नयाँ घर बनाउँदा छतमा चारैतिर बार लगाउनू र त्यहाँबाट कोही लड्‌यो भने पनि उसको मृत्युको दोष तिमीहरूको घरानालाई लाग्नेछैन।”—व्यवस्था २२:८.
रिसलाई काबूमा राख्नुहोस्‌।
“समझदार मानिस हतपती रिसाउँदैन तर मूर्खले आफ्नो रिस देखाइहाल्छ।”—हितोपदेश १४:२९.
ठीक मात्रामा खानुहोस्‌।
“घिचुवाहरूको सङ्‌गत नगर्‌।”—हितोपदेश २३:२०, RV.
स्वस्थ हुन तपाईंले चाल्न सक्ने पाँच कदम।
हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो भने के हामी निराशामा डुब्नुपर्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने शारीरिक स्वास्थ्य
आफ्नो जीवन अर्थपूर्ण बनाउनुहोस्‌—शारीरिक स्वास्थ्य